USB uye microSD ndangariro kune ese anoshandisa Kioxia [KUDZIDZISA] | Gadget nhau
Mhinduro dzekuchengetera dzakura zvakanyanya, kunyanya kana tichifunga zvinodiwa nevashandisi uye kugona kwemafaira matsva e multimedia ine resolution ye4K iri kuwedzera kufarirwa. Ndicho chikonzero nei inozivikanwa brand Kioxia yakafunga kumutsiridza huwandu hwayo hwemakadhi e MicroSD uye matanda eUSB.
Nhasi tine patafura yekuyedza iyo U365 USB ndangariro uye iyo Exceria 128 GB microSD kadhi kubva kuKioxia. Tsvaga mashandiro ayo uye kugona kwayo kwakakodzera kuita kurekodha, kuchengetedza uye kutamba mabasa, nekudaro uchivandudza nzira yaunogadzira nekushandisa zvemukati
Mune ino kesi isu tinotanga neKioxia 128GB USB memory. Iyo yazvino kuvhurwa kwechiratidzo inopihwa mune kugona kwe 32/64/128 uye 256 GB. Iko kushandiswa kwayo kwakaringana ndiko kwekufambisa data uye kune USB tekinoroji. 3.2 Gen 1.
Size: X X 55,0 21,4 8,5 mamirimita
Weight: 9 gramu
Ine yekutsvedza tebhu izvo zvinotibvumira kusevha iyo USB uye nekudaro kuchengetedza magumo ekuvandudza kusimba kwechigadzirwa. Sezvinotarisirwa, isu tinowirirana neWindows 8 zvichienda mberi uye macOS X 10.11 zvichienda mberi.
Tenga Kioxia U365 kubva ku € 13,30 paAmazon
Semukana, zvigadzirwa zveKioxia zvese zvine garandi yemakore mashanu. Yakagadzirwa nepurasitiki nhema nhema yakanangana nekusimba. Mukuyedzwa kwedu takawana kuita kweanenge makumi matatu MB / s ekunyora uye angangoita 30 MB / s ekuverenga, chimwe chinhu chiri pamusoro kunyangwe iyo data inopihwa neiyo mhando, iyo inovimbisa ingangoita 150 MB / s.
Nenzira iyi, inova chigadzirwa chakanakisa kuendesa edu ekuchengetedza makopi kana kuve neyechipiri mashoma ekuchengetedza paPC yedu kana Mac. Isu pachedu takaongorora mashandisiro ekuchinjisa mafirimu e4K HDR, zvichitibvumira kufambisa vhidhiyo mune hunhu uhwu kusvika pamakumi matatu emaFPS, saka zvinoita senge inochinja uye inonakidza sarudzo. Mutengo waro unosvika pakati pe € 30 ne € 20 zvinoenderana nenzvimbo yekutengesa inosvika pa30 GB.
Isu tava kutendeukira kumakadhi e MicroSD, kunyanya kune 128GB modhi yayo inozivikanwa Exceria renji iyo inoratidzwa mune girini. Sezvatakambotaura kare, isu tine microSDXC I chigadzirwa cheClass 10 U3 (V30) kunyanya yakanangana nekurekodha uye vhidhiyo yekutamba mune 4K resolution sezvaitarisirwa. Naizvozvo, inoratidzwa sechigadzirwa chinokurudzirwa kumafoni ekumusoro-soro kana kurekodha uye kutora mifananidzo kamera.
Mune ino kesi, ongororo dzakaitwa dzakapa mhedzisiro yakafanana kune iyo yakashambadzirwa neiyo mhando, kusvika 85 MB / s yekunyora uye 100 MB / s yekuverenga. Izvi zvinonyanya kubatsira kana zvasvika pakudzosera iyo data ratiri kutora munguva chaiyo, zvese kurekodha uye kuburitsa zvave zvakanaka. Mumiyedzo yedu isu takashandisa Dashcam inorekodha mu1080p pa60FPS uye hatina kuwana chero matambudziko. Isu takatorawo mukana weiyo Xiaomi Mi Action Kamera 4K uye yakabudirira kutevedzera data rakapihwa naKioxia pawebhusaiti yayo yewebhu maererano nekuverenga nekunyora.
Tenga Kioxia microSD kadhi
Pakazara tichakwanisa kuchengeta dzinosvika mazana matatu nemazana matatu nemazana mashanu emifananidzo, ingangoita maminetsi zana nemakumi mapfumbamwe ekurekodha pakagadziriswa Yakazara HD kana maminetsi mazana matatu nemakumi mana nemana ekunyora 314K Sekuwedzera, iri kadhi rinoenderana nezvose zvigadzirwa zveApple, ine ESD immune, haina mvura uye X-ray chiratidzo (hachizotyoka kana ichiongororwa nehunyanzvi uhu). Nenzira imwecheteyo, ine kupisa kwekudzivirira kuti usarasikirwa nedhata rako nekuda kwekukanganisa tembiricha uye inopokana nekuvhunduka.
Yakazara HD (21 Mbps)
Ane BiCS Flash iyo inovimbisa kusimba kwayo mukuongorora makamera uye madashcams ayo anogara achinyora uye achibvisa zvirimo muchengeti, sarudzo yakanaka yekugadzira yakazvimiririra yekuchengetedza post.
Semunguva dzakapfuura, Kioxia inopa iyi microSD mukuchengetedza kwe 32/64/125 uye 256 GB yakazara, kuva inowirirana neyekare FAT32 zvishandiso.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » USB uye microSD ndangariro dzese dzinoshandisa Kioxia [KUDZIDZISA]